YEYINTNGE(CANADA): Thursday, November 10
by Udp Myanmar on Wednesday, 09 November 2011 at 05:38
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/10/2011 1 အကြံပြုခြင်း
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/10/20110အကြံပြုခြင်း
Kyaw Win Khine facebook မှ...
Published on November 10, 2011 by မင်းလွင် · No Comments
Published on November 10, 2011 by ရွှေအောင်
by FNG on November 10, 2011
Battle of Sirte ဆိုသည် မှာ လစ်ဗျား နိုင်ငံ ၏ နောက်ဆုံး ကျန် ရှိ နေ သည့် အာဏာရှင် ထိမ်းချုပ်
ထား ရာ မြို့ ကို လစ်ဗျား တော် လှန် ရေး သက်တမ်း နှင့် အတူ တိုက် ယူ ရခြင်း ကို ပြောခြင်း
ဖြစ်သည်။ အာဏာရှင် အသိုင်း အ၀ိုင်း ၊ လစ်ဗျား စစ်တပ် အရာ ရှိ များ ၊ လစ်ဗျား အစိုးရ
ခေါင်းဆောင် များ နှင့် ကဒါဖီ မွေးဖွား ရာ မြို့ ဖြစ်သောကြောင့် အဆိုပါ မြို့ကို လစ်ဗျား လက်နက်
ကိုင် တော်လှန်ရေး သမား များ ထရီပိုလီ မကျ မခြင်း သိမ်း ပိုက် နိုင် ခဲ့ ခြင်း မရှိ ကြ ချေ။
ဆာတ် သည် အသေဆိုး ဖြင့် အလ္လဟာ အရှင်မြတ် အမိန့် တော် ခံယူ သွား သည် အာဏာရှင်
ကဒါဖီ ၏ နောက် ဆုံး ခို လှုံ ရာ ဖြစ် ခဲ့ သည်။
ကဒါဖီ နှင့် အတူ အဖမ်းခံရ ခဲ့ ရပြီး ယခု မစ်ဆရာတာမြို့ ရှိ အကျဉ်းထောင် (ယခင်က နိုင်ငံရေး တက်ကြွ
လှုပ်ရှား သူ များ ကို ကဒါဖီက ဖမ်းဆီး ထားရာအကျဉ်း ထောင်) ထဲ တွင် ထိမ်းသိမ်း ခံထား ရသည့် ကဒါဖီ၏
ထိပ်တန်း လက်ထောက် တစ်ဦး ဖြစ်သူ မွန်ဆာ ဒေါ က CNN သတင်း ဌာန နှင့် တွေ ဆုံ ရာတွင်
“ ကဒါဖီ ဟာ ဆာတ် ကို ရောက် တော့ အတော်လန့် နေ ပြီ ဒီကို ထွက် ပြေးလာတဲ့ ကားတန်း တွေ
မှာ ရိက္ခာ တွေ ပါမလာ တော့ ဘူး ၊ သူတို့သား အဖ လူတွေ မနေ တော့ တဲ့ အိမ်တွေ ၀င်ပြီး နံပြား
တို့တို ရှည် တို့ လို စာကြွင်းစားကျန် တွေ ရှိ မလား ၀င် ပြီး ရှာ စား ရတယ် “ ဟု ပြောသည်။
ဆာတ် ရဲ့အနောက်ဘက် ကီလိုမီတာ ၂၀ လောက်မှာ Jaref ဆို တဲ့ ရွာလေး ရှိတယ်ဗျ။ အဲဒါ သူ့ မွေး ရပ်
မြေပဲ ၊ သူ အဲဒီ ကို သွား ချင်တယ်။ သူ အဲဒီ မှာ ပဲ အသက် ထွက် ချင် တယ် ပြောတယ်။ နောက် ကျတော့
ဒီမြို့မှာ စီအိုင်အေ နဲ့NTC အင်ဖော်မာ တွေ ခြေချင်း လိမ် နေတယ် ကြားတာ နဲ့ သူ မသွား ရဲ တော့ ဘူး၊
ကျွန်တော် တို့ ဒီမြို့ကို ရောက်လာတော့ ကျွန်တော် တို့ ဘ၀ တွေ ၁၈၀ ဒီဂရီ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လိုက်ပြီ
ဆိုတာ သိလိုက်တယ် ဟု ထရီပိုလီ မြို့မှ ကဒါဖီ နဲ့အတူ ထွက် ပြေး လာ သည့် လစ်ဗျား အာဏာရှင် ၏
လက်ရုံးက CNN ကို ပြောပြသည်။
အခုတော့ သူ လည်း မစ်ဆရာ တာ အကျဉ်းထောင် ထဲ က နေ ပြီး အမိန့် ချမယ့် ရက် ကို လက် ချိုး ရေတွက်
epa02975220 The body of dead former Libyan Leader Muammar Gaddafi is seen insideastorage freezer in Misrata, Libya, 21 October 2011. According to media reports on 21 October, NATO denied that it had deliberately targeted Libya's Muammar Gaddafi, but admitted bombing his convoy. NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen said on 20 October that the defence organization would soon end its mission in Libya now that Gaddafi's 'rule of fear has finally come to an end'. EPA/MOHAMED MESSARA ATTENTION EDITORS: THIS PICTURE CONTAINS GRAPHIC CONTENT
သူက “ လူ တွေ က ခက် သားဗျ ရှင် နည်း ရာ အဂ္ဂ လူထွက် NTC တပ် တွေ က အရေး မယူ ဘူး ၊ မူလရာ
ထူး ပြန်ပေး မယ် ဆို ပြီး မက် လုံး ပေး ခေါ် တဲ့ အခါ ကြ တော့ တစ်ချို့သစ္စာ ဖောက် သွား ကြတယ် ၊
ခေါင်းဆောင် ကြီး ကို ချီးထုပ် ကြီး ၊ လူသတ်ကောင် ကြီး ဆို ပြီး ဘက်ပြောင်း သွား ကြတယ်ဗျာ ဟု အချုပ်
ခန်း တွင်း မှ နေ ၍ ကဒါဖီ ၏ နောက်ဆုံး နေ့များ ကို သံဝေဂ ရဖွယ်ရာ ပြောပြ သည်။
နောက်ပိုင်း တွင် တော့ မွန်ဆာ ဒေါ လက်အောက် မှ ကဒါဖီ ကို ရာနှုန်း ပြည့် သစ္စာ ခံ သူများ က ဘက်ပြောင်း
မည့်သူများ ကို ပစ်သတ် ခြင်း ၊ ခြေလက် များ ဖြတ်တောက် ခြင်း တို့ကို ကဒါဖီ ၏ အမိန့်အတိုင်း ရက်
ရက် စက်စက် လုပ် ခဲ့ သည် ဟု New York Times သတင်း စာ နှင့် တွေ့ ဆုံ ခန်း တွင် ပြောပြသည်။
မွန်ဆာ ဒေါ သည် ထရီပိုလီ မြို့ ထဲ မှ ကဒါဖီ နှင့် အတူ “ ထွက်တော် မူ နန်း က ခွာ” သူ များ တွင် လိုက်
ပါ လာသူများ အနက် အကြီးဆုံး တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး အဘူ ဘာကာ ယူနစ် ကမူ ကဒါဖီ နှင့်
အတူ ကန္တာရ ထဲ တွင် အသက် ပျောက် သွား ခဲ့ ပြီ ဖြစ်သည်။
ကဒါဖီ က နောက်ပိုင်း နေတိုး ၊ နေတိုး ကို တော်တော် လန့် လာ တယ်။ တစ်ခါ တစ်လေ သူ ကုရ်အန် ကျမ်း
စာ ကိုင် ရင်း နေတိုး … နေ တိုး ဆို ပြီး ရွတ် နေတတ် တယ်။ မသိရင် ကုရ် အန် ထဲ မှာ နေ တိုး နဲ့ပတ်သက်
တဲ့ နှုတ်ကပတ် တော် ကို အလ္လာ က ပြောဆို သွား ပုံ ပဲ ဟု သူ ကြုံ ရတဲ့ အဖြစ် များ မစ်ဆရာတာ ရှိ
လစ်ဗျား ကြားဖြတ် အစိုးရ ထောက်လှမ်းရေး ဌာန ခွဲ ရှိ အခန်း ထဲ မှာ နေ ၍ Human Rights
Watch သို့ပြောပြ သည်။
အောက်တိုဘာ လ ၁၉ ရက်နေ့ညတွင် NTC တပ်များ ကဒါဖီ တို့စခန်း ချရာ ဆာတ်မြို့ထဲမှ အမှတ်
၂ ခရိုင် အထိ ချီတက် လာ နေပြီ ဆို သည့် သတင်း ကို ရလိုက် သည်။ ထိုနေ့ ကား အမေရိကန် နိုင်ငံ
ခြားရေး ၀န်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် ထရီပိုလီ သို့ လာရောက် လည်ပတ်ပြီး နောက်တစ်နေ့ တွင် ဖြစ်
ယခု ထောင်သွင်း အကျဉ်းချ ခံထားရသည့် ကဒါဖီ ၏ ညာလက်ရုံး နှင့် လစ်ဗျား စွမ်း အား ရှင် ခေါင်းဆောင် မူဆာဒေါ Photo : New York Times
ဒါဆို သူတို့အမြန်ဆုံး ဒီမြို့က ထွက်ပြေးမှ ဖြစ်တော့ မည် ကဒါဖီ က ညတွင်းချင်း ထွက် ပြေး ချင် နေသည်။ မနေ့ ကတော့ သူ့ သမီးလတ်အယ်(လ)ဂျီးရီးယား နယ်စပ် မှာ ကလေး မွေး တယ် ဆို တာ သူ သိလိုက် သည်။ သူ ဒီမြို့က အမြန် ဆုံးလွတ် မြောက်ရန် တပ် ပြန် စု သော်လည်း ချက်ခြင်း တပ်ပြန် စု ၍ မရ။ အားလုံး တစ်ကွဲ တစ်ပြား စီဖြစ်နေသည်။ အချို့က ကဒါဖီ နှင့် မလိုက် လို တော့ ၍ NTC တွင် လက်နက် ချသွား ပြီး အချို့က ပုန်းအောင်းနေကြသည်။ ကဒါဖီ က တပ်ပျက် နေသည် ဟု ပြောလျှင် မှန်ပေမည့် ဟု မူဆာ ဒေါ နှင့် အတူ အဖမ်းခံ
ရသည့် 2011 လစ်ဗျား အုံကြွမှု ကို နှိမ်နှင်း ခဲ့ သည့် ကဒါဖီ ၏ စွမ်းအားရှင် တပ်မှ ဗိုလ်မှုး ခါလစ် အယ်
မူဆာအင် က Human Rights Watch သို့ ပြောသည်။
မူလက နံနက် လေးနာရီ ဝေလီ ဝေလင်း အချိန် တွင် ဆာတ် မှာ ထွက်ပြေး ရန် စီစဉ်ထား သော်လည်း
လက်နက်ကြီးတင် ကားများ ကို ဆီဖြည့် နေပြီး လမ်းခရီး ဉ် စက်သုံးဆီ ပြတ်လပ်မှု မရှိရန် စီစဉ်နေရ
သောကြောင့် သတ်မှတ် ချိန် ထက် လေးနာရီ နောက် ဆုတ် ပြီးမှ မြို့က ထွက် ခွာ နိုင် ခဲ့ သည်။
ရုရှား လုပ် မြေပြင်မှ မြေပြင် ပြစ် ဒုံးလက်နက် တင်ဆောင်ထား သည့် ကား ခြောက်စီး နှင့် မြေပြင်မှ ဝေဟင်
ပြစ် ဒုံး လက်နက်ကို တင်ဆောင် ထား သည့် ကား နှစ် စီး ကို ဆီ အပြည့် ဖြည့်ပြီး ထိုကားများ အတွက် ထပ်
မံ လို အပ် မည့် လောင်စာ ဆီ ကို တိုယိုတာ ပစ်ကပ် ကားများ ပေါ် တွင် အပြည့် တင်ဆောင် ရခြင်းကြောင့်
ကဒါဖီ တို့ဆာတ်မြို့က ထွက် ချိန် တွင် မိုး စင်စင် လင်းနေ ပြီ ဖြစ်သည်။
မော်တော်ကား ၇၅ စီးဖြင့် ဆာတ်မြို့ ပြင် နှစ် ကီလို မီတာ လောက် အရောက်မှာ ကဒါဖီ ၏ ဂြိုလ်တုဖုန်း ခေါ်
ဆို မှု ကို နေတိုး က အတိအကျ ခြေရာ ခံ မိပြီး နောက်ဆယ် မိနစ် လောက် အရောက် မှာ တော့ မိုင်ထောင်
ချီ ဝေး သည့် အမေရိကန် နိုင်ငံ နီဗားဒါး ပြည်နယ် ရှိ လေတပ် စခန်း မှ ထိမ်းချုပ် မောင်းနှင် နေသည့် ပရီဒေ
တာ ဒရုမ်း ဖြင့် တစ်နာရီ ၇၅ မိုင်နှုန်း အရှိန် ခန့်မောင်းနှင်လာသည့် ကဒါဖီ တို့ကားတန်း မှာ ရှေဆုံးည ပစ်
ကပ်ကား နှင့် စစ်ကား နှစ် စီး ကို ပစ်ချလိုက်သည်။
ဆယ်မိနစ် လောက်အကြာတွင် ပြင်သစ် လေတပ်မှ တိုက်လေယာဉ်များ က ယာဉ်တန်းများ ကို ဆက်
လက် ပစ် ချ ရာ ယာဉ် အစီး ၂၀ ခန့် က မူလ ကားတန်း နှင့် ကွဲ ပြီး ကစဉ့် ကလျှား ဖြစ်ကုန်သည်။ အချို့ 
ပစ်ကပ် များ မှာ မီးလောင် ပေါက်ကွဲ နေပြီး ယာဉ်ပေါ် ပါလာ သည့် ကဒါဖီ ၏ သစ္စာ ခံ ၂၀ ကျော် သေ
ဆုံးခဲ့ ပြီး ဖြစ်သည်။ နေတိုးလေယာဉ် ၂ စီးက ထပ်မံ ပစ်ခတ် ပြီး နောက် တွင် NTC မြေပြင် တပ် ဖွဲ့များ
က ရောက်ရှိလာပြီး ပစ်ခတ် ရာ ကဒါဖီ ၏ တပ်ဖွဲ့များ မော်တော်ကာ တန်း များ ကို ၀ိုင်းဝန်း ပစ်ခတ် မှု ကြောင့်
ယာဉ်တန်း တွင် ပါလာ သူတို့ခွေးပြေး ၀က်ပြေး ဖြစ်ကုန် သည်။
နံနက် ကိုး နာရီ ဆယ်မိနစ် ခန့် တွင် တိုယိုတာ ထရပ် ကား တစ်စီးမှ လူ ကိုးယောက် ခန့် ပြေးဆင်းလာ ပြီး
ကားလမ်းဘေးရှိ ရေပိုက်မြောင်းများ ထဲသို့ဝင် ပုန်းကြသည်။ NTC တပ် ဖွဲ့က ထွက် လာ ဖို့ပြောသည့် အခါ
အထဲက ပြန်လည် ပစ်ခတ် သဖြင့် NTC တပ်ဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦး သေဆုံး ခဲ့ သည်။
ရေမြောင်းထဲ မှာ ပစ်ခတ် နေသူ အား NTC လက်ဖြောင့် သမား နှစ် ဦး က လေးချက် ပြန်လည် ပစ်ခတ် ပြီး
နောက် အထဲ မှ ပစ်ခတ် မှု များ ငြိမ်သွား ခဲ့ သည်။
လေး မိနစ် လောက်ကြာ တော့ ရေမြောင်း ထဲ မှ လူ ခြောက် ဦး ထွက် လာသည်။
ကဒါဖီ ၊ သူ ၏ သားဖြစ်သူ မူတာဆင် ကဒါဖီ ၊ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး နှင့် နောက်ထပ် လက်နက် ကိုင် သုံးဦး
ဖြစ်သည်။ NTC တပ်ဖွဲ့ဝင်များ က ကဒါဖီ ကို ဖမ်းဆီး ပြီး သူတို့၏ ယာဉ်တန်းဆီ သို့ခေါ်ဆောင် သွား
CNN သတင်းဌာန ကို မူဆာဒေါ က ပြန်ပြောင်း ပြော ပြ ချိန် တွင် သူ တို့ခေါင်းဆောင် ကြီး ရဲ့ဖင်ထဲကို
ဘက်နက် နဲ့ထိုးတယ်။ ကျွန်တော်လည်း တိုက်လေယာဉ် ကျဉ်ဆန် မှန် ထား တော့ သတိ မေ့ သွားတယ်။
ပြန်သတိရလာ တော့ မစ်ဆရတာ ဆေးရုံ အချုပ်ခန်း ထဲမှာ ဖြစ်ပျက် ခဲတာ တွေ အတွက် အလွန်
၀မ်းနည်း ပါတယ် လို့ပြောပါ ရစေ လို့သူက ညှိုးငယ် တဲ့ အသံ နဲ့CNN သတင်းဌာန ကို ပြောပါတယ်။
ကဒါဖီ နောက်ဆုံး ပုန်းအောင်ခဲ့ရာ ရေသွန်မြောင်းကြီး ၊ ယခု ဆာတ် မြို့ ခံ များ က ကမ္ဘာ လှည့် ခရီးသွား တို့ကို ဆွဲဆောင် မှု တစ်ခု ဖြစ်အောင် လုပ်နေပြီ ဟု ဆိုသည်။
ကဒါဖီ ဘယ်လို သေဆုံး ခဲ့ သလဲ (Special Report) II
ကဒါဖီ ဘယ်လို သေဆုံး ခဲ့ သလဲ (Special Report)
ဤဆောင်း ပါး ဖြစ် မြောက် ရေး အတွက် အယ်(လ)ဂျာဇီးယား ၊ ရိုက်တာ ၊ AFP ၊ AP ၊
Huffington Post၊ New York Times Times ၊ France 24 ၊ CNN ၊ လစ်ဗျား သတင်း
ဌာ န များနှင့် ၀ီကီ ပီဒီယား တို့ကို ကို ကား ခဲ့ ပါသည်။
Freedom News Group မှ နိုင်ငံ တကာ သတင်း အဖွဲ့က ဘာသာ ပြန်ဆို တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်နေ့စွဲနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်တဲ့ ဥပဒေထွက်လာတယ်။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာရေးဆိုတဲ့စကားရပ်ကို ပြောင်းလဲသုံးစွဲတယ်။ အနည်းဆုံး ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနည်းဆုံး ၃ နေရာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှု ပြုနိုင်၊ မပြုနိုင် ဆိုတဲ့စကားရပ်ကို ထည့်သွင်း ရှင်းလင်းလိုက်တယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား(ဟောင်း) တွေကို နိုင်ငံရေးပါတီများမှာ ၀င်ရောက်ခွင့်မရနိုင်အောင် ကန့်သတ်ထားတာတွေကို ပြင်ဆင်လိုက်တယ်။ အဲဒီ ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ လက်ရှိလွှတ်တော်ပြင်ပမှာ ရပ်တည်နေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းဆောင်တဲ့ အင်န်အယ်ဒီပါတီအနေနဲ့ အဆိုပါဥပဒေနဲ့အညီ ပါတီမှတ်ပုံတင်ရန်၊ လာမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်ရန်နဲ့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာမှုများကို ရင်ဆိုင်ရန် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြဖို့ လာမည့် နိုဝင်ဘာ ၁၈၊ သောကြာနေ့ကို ပါတီခေါင်းဆောင်များအသီးသီးနဲ့ အစည်းအဝေးကျင်းပမယ်ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယမန်နေ့က ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးမြန်းခဲ့သည်များကို တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
မေး။။၂၀၁၀ မတ်လ ၈ ရက်နေ့လောက်က ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေထွက်လာခဲ့တုန်းက အင်န်အယ်ဒီမှာ စီအီးစီတွေ အစည်းအဝေးထိုင်ချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ အဲသည်တုန်းက တခါတည်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ ရှိသလားဆရာ။
- မရှိပါဘူး။ ဘယ်သူမှလည်း သေချာ မသိကြသေးဘူး။ ဘယ်သူမှ မဆွေးနွေးနိုင်ကြဘူး။ နောက်တပတ်ဖြစ်တဲ့ မတ် ၁၅ ရက်နေ့ကျမှ အရေးပေါ်ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တယ်။
မေး။။ အဲသည်နောက် ၂၀၁၀ မတ် ၁၅ နောက်ပိုင်းမှာ ပါတီက ကန့်ကွက်သူမရှိတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ခဲ့တယ်။ ပါတီကို ထပ်မံမှတ်ပုံမတင်ခဲ့ဘူး။ အဲသည်တုန်းက ဆရာတို့က ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကို ရရှိထားတဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုကြီးဖြစ်တယ်လို့ သဘောထားပြောဆိုပြီးတော့ ရပ်တည်ခဲ့တယ်။ တရားဝင်ပါတီတို့ တရားမ၀င်ပါတီတို့လို့တောင်မှ မသုံးနှုန်းတော့ဘူး။ အဲသလို ရပ်တည်ခဲ့တာတွေကနေ တဆင့်ပြီး တဆင့် အခုလိုမျိူး တဖက်က စစ်အုပ်စုနဲ့ လက်ရှိကြံ့ဖွံ့အစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေဆီ ဦးတည်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ပြောလို့ ရမလားဆရာ။
- ပြောနိုင်ပါတယ်။ ပါတီဟာ အဲသည်တုန်းကတည်းက တရားမ၀င်ပါတီအဖြစ်နဲ့ ရပ်တည်ခဲ့ကြတယ်။ မြေအောက်လည်း မသွားဘူး၊ လက်နက်လည်း မကိုင်ဘူး။ လူထုတရပ်လုံးကလည်း ပါတီနဲ့ အတူတူရပ်တည်ခဲ့ကြတဲ့အတွက် အဲသည်တုန်းကတည်းက အစိုးရက ဘာမှ မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အဲသည်ကတည်းက ရပ်တည်ချက်မှန်လို့၊ မူပေါ်မှာ ရပ်လို့ လူထုရဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုကြီးအဖြစ် အောင်မြင်မှုတွေ ရခဲ့တယ်။
မေး။။ ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ မတ်လမှာ ကျနော်တို့ မေးခဲ့သလိုပေါ့လေ။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ဥပဒေတွေကြောင့် အင်န်အယ်ဒီဟာ ဟိုးတုန်းက လွတ်လပ်ရေးခေတ်ဦးကာလ ဖဆပလကြီး ၂ခြမ်းကွဲသလို အန်အယ်ဒီဟာ ကွဲမှာလားလို့ မေးခဲ့တော့၊ ဆရာတို့က မကွဲပါဘူးလို့ ပြောခဲ့တယ်။ ပါတီဟာ အဲသည်ကာလကို တစုတစည်းတည်း ရပ်တည်ပြီး ရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ အခုအချိန်မှာလည်းပဲ လက်ရှိအစိုးရဖက်က ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအရ ပါတီအနေနဲ့ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ဖို့ အခြေအနေကို ရောက်လာပြီလို့ အများက ပြောနေကြတယ်။ အဲသည်နေရာမှာ ဆရာတို့က အင်န်အယ်ဒီပါတီကြီးကို ၉၀ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာနဲ့အတူ ထားရစ်ခဲ့ပြီး ပါတီအသစ် လူအသစ်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြလိမ့်မယ်တော့ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
- အဲလိုမျိူး မဟုတ်ပါဘူး။ အင်န်အယ်ဒီပါတီဟာ ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ ရပ်တည်တဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့က နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကို တစုတစည်းတည်း ရပ်တည်ပြီး ရင်ဆိုင်သွားမှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာက သေချာပါတယ်။ အဲသည်လိုပဲ ကျနော်တို့တွေ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် ရပ်တည်ခဲ့ပြီး ဖြစ်တယ်။ အဲသည်အတွက် အင်န်အယ်ဒီဟာ မိမိရပ်တည်ချက်အတိုင်း၊ မူအတိုင်း ဆက်လက်ပြီး စုစုစည်းစည်း သွားကြမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
အဲသည်မှာ ကျနော်တို့က မြေပေါ်မှာ ရပ်တည်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတရပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် မှတ်ပုံတင်ဖို့ အခြေအနေရှိလာတယ်လို့ ဖြစ်လာတယ်လို့ ပြောရင်ရပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ဖို့ဆိုတာကတော့ အခုအချိန်မှာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနည်းဆုံး စတိဝင်မလား မ၀င်ဘူးလားဆိုတာ စဉ်းစားကြရမယ့် အချက်တခု ရှိနေတာပေါ့ကွာ။
နောက်ပြီးတော့လည်း လက်ရှိလွှတ်တော်ခေါင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့ ၉၀ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကို အသိအမှတ်ပြုပါတယ်တို့ ဘာတို့ ထုတ်ပြောလာတယ် ဆိုတာကလည်း ဘယ်လိုအတိုင်းအတာနဲ့ ပြောနေတာလည်းဆိုတာကို ပြန်ကြည့်ကြရမယ်လေ။ လွှတ်တော်ကခေါင်းဆောင်တွေက ထုတ်ပြောတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့တောင်းဆိုနေတဲ့ ၉၀ရွေးကောက်ပွဲကို တနည်းနည်းနဲ့ အသိအမှတ်ပြုရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို ပြောနေတာလား၊ ဒါက တရားဝင်ရဲ့လား၊ လုံလောက်သလား၊ လွှတ်တော်မှာ တင်ပြပြီး ထုတ်ပြန်ဖို့ လိုသလား စတာတွေက ဆွေးနွေးစရာ အချက်တွေ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။
မေး။။ ကျနော်တို့ မေးချင်တာကတော့ ဆရာရယ်၊ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကို အသိအမှတ်ပြုလိုက်တယ်ဆိုရင် အင်န်အယ်ဒီပါတီနဲ့ မဟာမိတ်တွေက အဲသည်ရွေးကောက်ပွဲကနေ ပြည်သူတွေက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း ခံလိုက်ရတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ပါတီတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာပါ တပါတည်း အသိအမှတ်ပြုသလိုဖြစ်သွားတယ်။ သို့သော် သူတို့တွေရဲ့ လွှတ်တော်ခေါ်ဆိုနိုင်ခွင့်တွေ၊ အစိုးရတရပ်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခွင့်တွေ မရရှိခဲ့ကြဘူး။ သူတို့ကို ကျော်လွန်ပြီးတော့ အခုကျတော့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတခုနဲ့ အခု ကြံ့ဖွံ့လွှတ်တော်တွေ အစိုးရတွေ ပေါ်ပေါက်လာတယ်။ ဒါကြောင့် အခုလက်ရှိ အစိုးရနဲ့ လွှတ်တော်က အဲသည်အပေါ်မှာ တစုံတရာ ထုတ်ပြန်ဖို့ လိုမယ် မဟုတ်ဘူးလား လို့ ကျနော်တို့က မေးခွန်းထုတ်နေကြတယ် ဆရာ။
- အဲဒါတွေက ပြောစရာတွေ အများကြီး ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့်လည်း အခုအချိန်မှာ ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ပေးလာတာတွေတော့ ရှိပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပါတီကနေ ထုတ်ပစ်ရမယ်လို့ ပြောခဲ့တာတွေ ရုတ်သိမ်းလိုက်တယ်။ လက်ရှိအခြေခံဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာရမယ်လို့ ပြောင်းပေးတယ်။ ဥပဒေဆိုတာကလည်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လေးစား လိုက်နာရမယ်ဆိုတာ the law ပဲလေ။ ဒါကြောင့် လက်ခံနိုင်စရာ ရှိတယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်လေ။ ရွေးကောက်ပွဲကို စတိပဲဖြစ်ဖြစ် ၀င်ဖို့ဆိုတာကတော့ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်ထဲမှာ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပေးရန်တို့၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ပြန်လွှတ်ပေးရန်တို့ ပါနေတော့ အခုအခြေအနေမှာက ဒါတွေက အပြည့်အ၀ မဖြစ်သေးဘူးလို့ ပြောလို့ရတယ်။ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က အခြေခံဥပဒေကို လိုအပ်ရင် ပြင်ဆင်ကြမယ်လို့ ပြောဆိုတာ ရှိသော်လည်း တကယ်တမ်း လွှတ်တော်မှာ မမြင်ရသေးဘူး။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွှတ်တာကလည်းပဲ နည်းနည်းပဲ ရှိသေးတယ်။ ဒါတွေကိုလည်း စဉ်းစားစရာ ဖြစ်နေတယ်။
မေး။။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းက တပိုင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်းက တပိုင်းလို့ ဖြစ်နေတာပေါ့ဆရာ။
- အဲဒါကို ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြတာတွေ ရှိတာပေါ့။ မှတ်ပုံပဲတင်ကြမယ် ဆိုတာက တပိုင်း၊ မှတ်ပုံတင်တာနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တယ်ဆိုတာ တဆက်တည်းဖြစ်တယ်၊ တခါတည်း ဆက်စပ်စဉ်းစားရမယ်လို့ ပြောကြတာလည်း တပိုင်းပေါ့ကွာ။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်းဟာ အခြေခံဥပဒေအောက်ကို ၀င်ပြီးတော့ လွှတ်တော်ထဲကို ၀င်တာဖြစ်တယ်လို့ စဉ်းစားကြတာလည်း တပိုင်း။ ၃ မျိုးရှိတယ် လိ်ု့ပြောရင်ရတယ်။ ၁ မျိုးကတော့ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်းကို ခွဲခြားပြီး စဉ်းစားမယ့်ဟာ ရှိမယ်။ နောက် ၁ပိုင်းကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ခုချိန်မှာ အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်က တခါတည်း ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီးတော့ လွှတ်တော်ထဲကနေ လုပ်ဆောင်စေချင်တဲ့ သဘောထားရှိတဲ့သူတွေကတော့ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ရွေးကောက်ပွဲဝင်တာနဲ့ တပါတည်း ဆုံးဖြတ်မယ်လို့ စဉ်းစားတဲ့ အပိုင်းလည်း ရှိမှာပေါ့ကွာ။ နောက်တပိုင်းကတော့ ပါတီကို မှတ်ပုံတင်သော်လည်း လက်ရှိအခြေခံဥပဒေကို ခေါင်းလျိူဝင်ရမယ့် လွှတ်တော်တက်ဖို့အတွက်တော့ ရွေးကောက်ပွဲမ၀င်နိုင်ဘူးလို့ စဉ်းစားတာကလည်း တပိုင်း ရှိနိုင်တယ်လို့ စဉ်းစားရင် ရမယ် ထင်ပါတယ်။
မေး။။ အဲသည်လို အပိုင်းတွေရှိသော်လည်း ဆွေးနွေး ငြင်းခုံ စဉ်းစားကြတာတွေရှိသော်လည်း အင်န်အယ်ဒီဟာ အစိတ်စိတ် အပိုင်းပိုင်း အကွဲကွဲ အပြားပြားနဲ့ ဖြစ်လာလိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောရင် ရမလားဆရာ။
- ရပါတယ်။ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ မတ်လမှာတုန်းက ကျနော်တို့ပါတီကအင်အားစုတွေတရပ်လုံးက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့စဉ်က စနစ်တကျ စည်းကမ်းရှိရှိ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ တစုတစည်းတည်း ဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့သလိုမျိူး အခုလည်းပဲ ဒီလိုပဲ ကျနော်တို့တတွေက ရင်ဆိုင်ကြမယ်၊ ဆုံးဖြတ်ကြမယ်၊ လိုက်နာကြမယ်ဆိုတာကို ပြောနိုင်ပါတယ်။ အဲသည်တုန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်က နေအိမ်အကျယ်ချူပ်ကျနေခဲ့တယ်။ အခုအချိန်မှာကျတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်က ရှေ့ထွက်ပြီး ဦးဆောင်မှုပေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ အဲလို ပြောနိုင်ပါတယ်။
မေး။။ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ တဆက်တည်းပဲ မနေ့က အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ နှစ်ရှည်ကျနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ၊ အင်န်အယ်ဒီပါတီဝင် မဏီက ပြင်ပက ရဲဘော်တွေ၊ မိတ်ဆွေတွေဆီ ထောင်ထဲက ပေးစာလေးတခု ပို့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ မိုးမခမှာ တင်ထားတယ်။ သူကတော့ အတိုချူံးပြောရင် အန္တရာယ်ကင်းဖို့၊ နိုင်ငံရေးပါးနပ်ဖို့၊ စည်းလုံးညီညွတ်ကြဖို့နဲ့ ပန်းတိုင်တူပြီး နည်းနာကွဲနေမယ်ဆိုရင် ခွန်အားတွေ နည်းမယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ အဲသည်ပန်ကြားစာလေးကို ဆရာကို တင်ပြပါတယ် ဆရာ။
- ကောင်းပါတယ်။ အဲသည်လိုကြားရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ ကျနော်တို့တွေက စနစ်တကျနဲ့ စည်းကမ်းတကျနဲ့ ညီညီညွတ်ညွတ် ရင်ဆိုင်ကြမယ် ဆိုတာကို တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ ကိုဇာဂနာတို့၊ ကိုစိုးထွန်းတို့၊ ၈၈ မျိူးဆက်တွေ၊ လူငယ်မျိူးဆက်သစ်တွေကိုလည်း တညီတညွတ်တည်း လုပ်ကြရမှာပဲလို့ တိုက်တွန်းနေတာပါပဲ။ သဘောထားတွေ အယူအဆတွေကလည်း ကွဲပြားတာတော့ ရှိကြမှာပဲ။ နားလည်မှုကို တည်ဆောက်ကြရမှာပဲ။ လှေလှော်နေကြသလိုမျိူးပေါ့လေ။ အားလုံးက တည့်မတ်အောင် ထိန်းသိမ်းပေးနေရတယ်လို့ ပြောချင်တယ်။
မေး။။ အခုလိုမျိူး အပြောင်းအလဲမှာ ကျနော်တို့က ပြောချင်တာတခုကတော့ အစတုန်းက ဒေါ်စုလွတ်လာပြီးတော့ အင်န်အယ်ဒီနဲ့ ဒေါ်စုရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ကြံ့ဖွံ့အစိုးရရဲ့ ပြည်ထဲရေးကနေ ကန့်သတ်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ဒေါ်စုက အစိုးရနဲ့ စကားပြောချင်တယ်လို့ တောင်းဆိုတယ်။ နောက်တော့ ဦအောင်ကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံတယ်။ အဲသည်တုန်းကလည်း ဒေါ်စုကိုပဲ အသိအမှတ်ပြုပြီး ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ ပါတီကို ထည့်သွင်းပြောဆိုခြင်း မရှိခဲ့ဘူး။ နောက် အားလုံးက၀ိုင်းပြီးပြောဆိုကြလို့ ပါတီခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ ဒေါ်စုကို တွေ့ဆုံတာ၊ ပါတီနဲ့ပတ်သက်ပြီး လက်ခံတယ် ဘာညာ ဖြစ်လာတယ်လေ။ အခုကျတော့ ပါတီနဲ့ ဒေါ်စုကို လက်ရှိအစိုးရက အရေးတယူလက်ခံပြီး မှတ်ပုံတင်တာတွေ ဘာတွေ လုပ်လာသော်လည်း အစိုးရနဲ့ အာဏာပိုင်အဆင့်ဆင့်က ပါတီရဲ့ လူကြီး၊ လူငယ်၊ ပါတီဝင်စတဲ့ အဆင့်ဆင့်ကို အသိအမှတ်ပြုပြီး ဆက်ဆံတာတွေ မမြင်ရသေးဘူး။ ဖြစ်သင့်တာက လက်ရှိအစုိုးရ၊ လွှတ်တော်နဲ့ အာဏာပိုင်တွေဟာ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ၊ မိသားစုတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကို သာတူညီမျှ အရေးထားပြီး ဆက်ဆံရမယ်၊ သူတို့ဆန္ဒတွေကို အသိအမှတ်ပြုရမယ်ဆိုတဲ့ အဆင့်တွေ ဖြစ်ထွန်းလာဖို့ လိုသေးတယ်လို့ တင်ပြလိုပါတယ် ဆရာ။
- ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါကို ကျနော့်အနေနဲ့ လက်ခံပါတယ်။
မေး။။ ဒီမေးခွန်းကတော့ နည်းနည်းရှည်တယ်။ ခွင့်ပြုပါဆရာ။ အခုက နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲကာလတခုကို သွားနေတဲ့အချိန်လို့ ပြောကြတယ်ဆရာ။ ကျနော်ကတော့ ၁၉၆၂ စစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင် ဖဆပလကြီးကွဲခဲ့တာကို မြင်ယောင်ခဲ့တယ်။ ဒါကို ဆရာ့ကို မေးခဲ့ဘူးတယ်။ အခု မြင်ယောင်တဲ့ဖြစ်ရပ်တခုကတော့ ၁၉၇၄ မှာ စစ်တပ်က ဆိုရှယ်လစ်တပါတီ အခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြုခဲ့တဲ့ အချိန်ကို ပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ အဲသည်မှာ စစ်အာဏာရှင်တဖြစ်လည်း တပါတီအာဏာရှင်နိုင်ငံရေးအောက်မှာ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေရဲ့ ရပ်တည်မှုတွေ အားနည်းကုန်တယ်၊ လျော့ကျတယ်၊ ပျောက်ပျက်ကုန်တာတွေရှိတယ်။ စာပေ အနုပညာနဲ့ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေ ဖိနှိပ်ခံခဲ့ရတယ်။ ဥပမာ ဆရာတို့ကိုယ်တိုင် ဟံသာဝတီသတင်းစာ အယ်ဒီတာအဖြစ်က ဖယ်ရှားခံရတယ်။ ကိုကိုးကျွန်းပြန်တွေ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို လူထုနဲ့ ပြန်လည်ဆက်စပ်မှုမရှိအောင် အာဏာရှင်တွေက ကန့်သတ်တာတွေ၊ ဖိနှိပ်ထားတာတွေ လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲသည် ၇၅၊ ၇၆ ကာလတွေမှာ ကျောင်းသား၊ အလုပ်သမားနဲ့ ဦးသန့်အရေးအခင်းတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း စစ်တပ်က ချေမှုန်းဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့လို့ ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံကြီး မပေါ်ခင်စပ်ကြားမှ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေ မျိုးဆက်တွေ အဆက်ပြတ်ခဲ့ရတာကို ပြန်တွေးမိတယ်။ အခုအချိန်မှာလည်းပဲ မတော်တဆပေါ့လေ၊ အခန့်မသင့်လို့ပဲ ထားပါတော့ ကျနော်တို့တတွေရဲ့ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ၊ လွတ်လပ်ခွင့်တွေ၊ လှုပ်ရှားခွင့်တွေဟာ ပုံသဏ္ဍန်အရ အားနည်းကုန်တာ၊ ပြောင်းလဲ လျော့နည်းကုန်တာတွေ ဖြစ်မလာဘူးလို့ ပြောနိုင်သလား။
- ကျနော် ယခင်ကအင်တာဗျူးတွေမှာ ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်။ ကျနော်တို့က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ၊ ထောင်ထွက်တွေ၊ ၈၈ မျိူးဆက်တွေ၊ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်တွေ ကျောင်းသားတွေဟာ မိမိတို့ရဲ့ မူလနိုင်ငံရေးဘ၀တွေကို ဆက်လက်တည်ဆောက်ကြရမယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကလည်း ၀ိုင်းဝန်းအားပေး ထောက်ခံမှုတွေ ပြုရမယ်လို့ ပြောဖူးတယ်။ ကျနော်ကတော့ ခင်ဗျားပြောသလိုမျိူး မပြောချင်ဘူး။ အခုအချိန်မှာ မိမိရဲ့ ယုံကြည်ချက်နဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေးဘ၀ကို စွန့်လွှတ်ပြီးတော့ အခြားဘ၀တခု ထူထောင်တာမျိုးထက် ဆက်လက်ပြီး နိုင်ငံရေးပုံသဏ္ဍန်ကို ဖြစ်ထွန်းလာအောင် ထူထောင်ကြရမယ့် အချိန် ဖြစ်တယ်လို့ ပြောနေတာ ဖြစ်တယ်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းက ပုံသဏ္ဍန်ကို ပြောတာထက်၊ ကျနော်ပြောချင်တဲ့ ပုံသဏ္ဍန်ကတော့ – ကိုလိုနီခေတ် ၁၉၃၈ နောက်ပိုင်း၊ ၁၃၀၀ ပြည့်အရေးတော်ပုံကာလနောက်ပိုင်းမှာ သခင်အောင်ဆန်းတို့ သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားမျိုးဆက်တွေဟာ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းတို့ရဲ့ ဒို့ဗမာအစည်းအရုံးထဲကို ခြေစုံပစ်ဝင်ပြီးတော့ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးထဲကို နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲမှာ ၀င်ရောက်လာတာမျိုးလိုပဲ ကျနော်က ပြောချင်တယ်။ ယခုအချိန်မှာ အားလုံးကို ဒီလိုပဲ တိုက်တွန်းပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာက နိုင်ငံရေးအကြောင်းအရာတွေက ပျောက်ကွယ်သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးအကြောင်းအရာတွေ လုပ်စရာတွေ အများကြီး ဆက်လက်ရှိနေတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးပုံသဏ္ဍန်တွေကို ဆက်လက်ထုတ်ဖော်ရမယ်၊ ထူထောင်တည်ဆောက်ကြရမယ်လို့ ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို မိသားစုတွေ ပတ်ဝန်းကျင်တွေက အားပေးရမယ်။ ၀န်းယံတည်ဆောက်ပေးကြရမယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
မေး။။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဆိုတော့ သတင်းသမား ရှုထောင့်က မေးခွန်းတခုကို ကျနော် စမေးချင်ပါတယ်။ Objectivity လို့ခေါ်တယ့် ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျတဲ့ မေးခွန်းပါ။ ကမ္ဘာပေါ်မျာ သူတော်စဉ်လိုမျိုး လေးစားကြည်ညိုခြင်း ခံကြရတဲ့ Nelson Mandela လို့လို၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့လို ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းကို ရေးရတာ ပြောရတာ ကျနော်တို့ journalists တွေအတွက် အင်မတန် တာဝန်ကြီးပါတယ်။ သူတို့ကို ဝေဖန်တာတွေ၊ အားသာချက်တွေနဲ့အတူ အားနည်းချက်တွေကို ထည့်ပြောဖို့ဆိုတာ အင်မတန် အခက်အခဲ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒီလို အခက်အခဲမျိုး အခုအခါ Peter တွေ့ရပါသလား။ Peter ရဲ့  စာအုပ်ဟာ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျတယ်လို့ အခိုင်အမာ ပြောနိုင်ပါသလား။
မုန်တိုင်းထဲမှာ ကြွေတဲ့ ကြယ်တပွင့်
ဦးမောင်ကို ကွယ်လွန်ခြင်း ၂၁ နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ အလှူဒါနပွဲအပြီး ပြန်လည်ထွက်ခွာလာသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် နံနက်ပိုင်းက တွေ့မြင်ရစဉ်။ (ဓါတ်ပုံ- မဇ္ဈိမ)
ဦးမောင်ကို ကွယ်လွန်ခြင်း ၂၁ နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ အလှူဒါနပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် ဦးဝင်းတင်အားနှုတ်ဆက်နေသည့် ဟာသသရုပ်ဆောင် ဇာဂနာအား နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် နံနက်ပိုင်းက ဗဟန်းမြို့နယ် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိ ကန်ဖျားကျောင်းတိုက်တွင် တွေ့မြင်ရစဉ်။ (ဓါတ်ပုံ- မဇ္ဈိမ) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်သမားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင် ဦးမောင်ကိုသည် ၁၉၉ဝ ခုနှစ်က နိုင်ငံရေးအမှုဖြင့် ထိမ်းသိမ်းခံရစဉ် ရေကြည်အိုင် စစ်ကြောရေးစခန်း နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်၌ ကွယ်လွန်သွားခဲ့သူဖြစ်သည်။
ဗဟန်းမြို့နယ် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိ ကန်ဖျားကျောင်းတိုက်တွင် ပြုလုပ်သည့် ဦးမောင်ကို ကွယ်လွန်ခြင်း ၂၁ နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ အလှူဒါနပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကန်ဖျားကျောင်းတိုက် ဆရာတော်၏ သြဝါဒခံယူနေသည်ကို နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် နံနက်ပိုင်းက တွေ့မြင်ရစဉ်။ (ဓါတ်ပုံ-မဇ္ဈိမ ) မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့မှ အရာရှိဟောင်းတဦးဖြစ်သူ ဦးမောင်ကိုသည် ၁၉၈၈ ခုနှစ် အရေးအခင်းတွင် နိုင်ငံရေးလောကအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
ဗဟန်းမြို့နယ် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိ ကန်ဖျားကျောင်းတိုက်တွင် ပြုလုပ်သည့် ဦးမောင်ကို ကွယ်လွန်ခြင်း ၂၁ နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ အလှူဒါနပွဲတွင် ကန်ဖျားကျောင်းတိုက် ဆရာတော်အား ဆွမ်းကပ်လှူဒါန်းနေသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် နံနက်ပိုင်းက တွေ့မြင်ရစဉ်။ (ဓါတ်ပုံ- မဇ္ဈိမ)
ဦးမောင်ကို ကွယ်လွန်ခြင်း ၂၁ နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ အလှူဒါနပွဲ ပြုလုပ်ရာ ဗဟန်းမြို့နယ် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိ ကန်ဖျားကျောင်းတိုက်ပေါ်မှ အင်းယားကန်ရှုခင်းအား ကြည့်ရှုနေသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် နံနက်ပိုင်းက တွေ့မြင်ရစဉ်။ (ဓါတ်ပုံ- မဇ္ဈိမ)
Thursday, November 10, 2011 Sithu Linn
ဧရာဝတီမှာ အင်္ဂါနေ့က ဖော်ပြခဲ့တဲ့ သတင်းပါ။
နောက်ဆက်တွဲ ရောက်လာတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့အတူ သတင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ထိုင်းနယ်စပ် ဗုံးကွဲမှု စက်လှေ သုံးစင်းပျက်စီး
သန်းထိုက်ဦး November 8
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် မယ့်စံမလဲ့ (ခေါ်) သော်လဲ့ထကျေးရွာ ဆိပ်ကမ်းတွင် အင်အားပြင်းသော ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတခု တနင်္ဂနွေနေ့ က ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အကြီးစားစက်လှေတစင်း အပါအ၀င် စက်လှေသုံးစင်း ထိခိုက်ပျက်စီးသွားသည်ဟု မျက်မြင်သက်သေနှင့် ဒေ သ ခံ စီးပွားရေးသမားများက ပြောသည်။
ဘတ်ငွေ တသိန်းရှစ်သောင်း ခန့် တန်ဖိုးရှိသော စက်လှေကြီးတစင်းနှင့် ဘတ်ငွေ တသိန်းနှစ်သောင်းခန့် တန်ဖိုးရှိသည့် စက်လှေငယ် နှစ်စင်းတို့ ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့က ဆိုသည်။
နံနက် ၉ နာရီခန့်တွင် ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး လူထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရမှု မရှိကြောင်း သိရသည်။ သော်လဲ့ထ ကျေးရွာသည် ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဟောင်ဆောင် ခရိုင် မယ့်စရီးယမ်း မြို့နယ်၊ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် သံလွင်မြစ်ကမ်း နံဘေးတွင် တည်ရှိသည်။
သော်လဲ့ထရွာနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် မြန်မာ အစိုးရက တပ်စွဲထားသည်။ ပျက်စီးသွားသည့် လှေကြီးမှာ ကုန်တင်စက်လှေ ဖြစ်ပြီး နွားအကောင်ရေ ၃၀ နှင့် ၄၀ ခန့် တင်ဆောင်နိုင်သည်ဟု သိရသည်။ စက်လှေကြီးသည် ခါးလယ်မှ နှစ်ပိုင်းကျိုး သွားပြီး အနီးအနားရှိ လှေငယ် နှစ်စီးလည်း အနည်းအငယ် ပျက်စီးသွားကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ သော်လဲ့ထရွာတွင် နေထိုင်သည့် ဖိုးသောကြာ ဆိုသူက ပျက်စီးသွားသော စက်လှေကြီးကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ဒေသခံ ကုန်သည် နော်ဒါးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“အသံကတော့ အကျယ်ကြီးပဲ၊ မနက် ၉ နာရီလောက်မှာ ပေါက်တယ်၊ အိမ်ထဲမှာ နေတာတောင်မှ အိမ်က တုန်သွားတယ်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ဖိုးသောကြာသည် သော်လဲ့ထ တဖက်ကမ်းတွင် တပ်စွဲထားသည့် မြန်မာအစိုးရတပ်များနှင့် ရင်းနှီးပြီး စားနပ်ရိက္ခာများကို လည်း သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးလေ့ ရှိသည်။
အခင်းဖြစ်ပွားသည့် နေ့တွင် အစိုးရတပ် အပြောင်းအလဲ လုပ်နေချိန်နှင့်လည်း တိုက်ဆိုင်နေသည်။ အစိုးရပ်တပ်များ အပြောင်း အလဲလုပ်ရန်အတွက် ဖိုးသောကြာကို အကူအညီ တောင်းထားကြောင်းလည်း သိရသည်။
သို့သော် ယင်းပေါက်ကွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံပြောဆိုခြင်း မရှိပေ။
“တချို့ကလည်း KNU လုပ်တာလား၊ စီးပွားရေးသမား အချင်းချင်း မကျေနပ်လို့ ပေါင်းပြီးတော့ခွဲတာလား ဆိုပြီးတော့ အမျိုးမျိုး
ပြောနေကြတယ်”ဟု ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
ထိုင်း ဒေသခံ အာဏာပိုင်များကလည်း စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ စစ်အစိုးရတပ် အပါအ၀င် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး(KNU) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး (ABSDF) အဖွဲ့တို့ကလည်း ယင်း နယ်မြေတွင် လှုပ်ရှားနေကြသည်။
Thursday, November 10, 2011 Khet Htan
တရုတ်နိုင်ငံ Zhejiang ပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်း Yuyao မြို့ ချည်ထည်စက်ရုံတခုမှာ ကျွန်အဖြစ်ခိုင်းစေခံထားရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ဆယ်ကျော်သက် ၇ ဦးကို တရုတ်ရဲတွေက ကယ်ဆယ်ခဲ့ကြောင်း ရှန်ဟိုင်းနေ့စဉ် သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဲဒီစက်ရုံက ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့ မြန်မာဆယ်ကျော်သက် နှစ်ယောက် (ကျား မ ဖော်ပြမထား) အဝေးပြေးလမ်းပေါ်မှာ ၃ ရက်ကြာလမ်းလျှောက်ပြီး ငတ်ပြတ် အားနည်းနေတာကို ရဲတွေက တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
By မိုင်အဲမလီ on November 10, 2011 5:37 pm
၂၀၀၉ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်း ဘန်ကောက်မြို့ မြန်မာသံရုံးရှေ့ကို ဆန္ဒပြသတင်း သွားယူတုန်းက အငှားကားထဲမှာ ကြုံခဲ့ရတဲ့ ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်အပျက်တခုပါ။
နည်းပညာ တန်ဆာဆင်၊ ရင်မောအောင် လှနေတဲ့ ဘန်ကောက်မြို့ကြီးက ရိသဲ့သဲ့အပြုံးနဲ့ မျက်နှာစိမ်း သမီးကညာကို အချဉ်ဖမ်းဖို့ စောင့်နေတယ်။
“ပိုင် စထန်ထွတ်ဖမာ့ခါး” (မြန်မာသံရုံးကို သွားချင်လို့ပါရှင့်)
“ခပ်ဖုန်” (ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျား)
အနံကြီးပြီး ကွင်းကျယ်လွန်းလို့ မြင်မြင်သမျှ မွန်းကျပ်စရာ ကောင်းလိုက်တာ။
ထိုင်းစကားမပြောတတ်သူ လူအ ဖြစ်တဲ့ ဒီမြို့မှာ အရေးပါတဲ့ စကားတခွန်း ရွတ်ဖတ်နေမိတယ်။ “ စထန်ထွတ်ဖမာ့” ..” စထန်ထွတ်ဖမာ့” ။
စရိုက်အစုံစုံ ကာလာတွေပုံနေတဲ့ ဒီဘန်ကောက်ကြီးမှာ ဆန္ဒတွေဖော်ပြ၊ သပိတ်မှောက်ကြတဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေစုဝေးရာ မြန်မာသံရုံးရှေ့ကို သတင်းရရေး လက်မနှေးအောင် တက္ကစီကားကို ကျမ ငှားပြီး ခရီးအသော့နှင်လာခဲ့ပါပြီ။ တကယ်လို့သာ ဒီခရီးမှာ လိုရာကို မပို့ပေးဘဲ လူမှောင်ခိုတို့ ပျော်စံ ငရဲလမ်းကို ပို့ဆောင်နေတယ် ဆိုတာ ကျမကြိုသိခဲ့ရင်၊ ဒရိုင်ဘာက လူကုန်ပွဲစား ချိုကားယားနဲ့ အသားစား ဘီလူးတကောင် ဆိုတာ ကျမသိခဲ့ရင်။
ကမ္ဘာကြီး အိုမင်းလာတာနဲ့အမျှ လူသားတွေ အကြံများ၊ ဉာဏ်များလာတယ်။ လူကုန်ကူးခံ ရတာတွေ၊ ရောင်းစားခံရတာတွေ၊ အမျိုးသမီးတွေ ပြည့်တန်ဆာဘ၀ သွပ်သွင်းခံရတာတွေ အင်တာနက်မှာ ဖတ်လို့မကုန်အောင် များပြားနေတယ်။ ခုတော့ သတင်းမုဆိုးကျမ သားကောင် လုံးလုံး ဖြစ်ခဲ့ရ။ စာဖတ်သူတို့လည်း ကျမနဲ့အတူ ဒီအန္တရာယ်ကနေ ကူပြီးရုန်းထွက်ပေးပါ။ ကူပြီးတိုက်ခိုက်ပေးကြပါ။ ကျမနဲ့အတူ ဒီကားထဲမှာ လိုက်ပါပေးကြပါ။ သတိ! ဦးနှောက် အလန်းများ မိုင်ကုန်ဖွင့်ထားပါ။
လူပွဲစား ဒရိုင်ဘာက ပိုက်ထဲ တိုးဝင်မိလာတဲ့ ကျမကို သားကောင်စစ်မစစ် ခန့်မှန်းတော့တယ်။ Where from … ? ကျမပြန်ဖြေပါတယ်။ From Burma..။ ဖမာ့..ဖမာ့..အိုး ဖမာ့…။ အရောင်လဲ့နေတဲ့ မျက်လုံးနဲ့ ကျမကို ကြည့်ပြီး တတွတ်တွတ် ရွတ်နေလိုက်တာ ဖမာ့..ဖမာ့…ဖမာ့..။ တမာ့ တည်း မာ့နေပြီ။ သူ ဘာကြောင့် ဒီလောက် ပျော်မြူးနေပါလိမ့်။
အနေအထားအရ ကားထဲမှာ ကျမနေရာယူတာ မှန်နေပါတယ်။ သူ့နောက်တည့်တည့်မှာ ထိုင်ပြီး လိုက်လာပါတယ်။ ဒီကားထဲမှာ ယာဉ်မောင်းသူနဲ့ ခရီးသည် ဒီနှစ်ယောက်တည်း။ မသိလိုက်တဲ့ အချက်က သူဟာ လူပွဲစား၊ လူကုန်ကူးသမားဆိုတာပါပဲ။ ကျမကို ချည်တုပ်နိုင်ဖို့ သူ့ရဲ့ ဒုတိယ စမ်းသပ်ချက် လာပါပြီ၊ ထိုင်းစကား တတ်လား ဆိုတာ မေးနေပါတယ်။ ကျမ မတတ်ပါဘူး။ ဟင့်အင်း No ..။ သေချာသွားပြီ နောက်ဆုံးတခုပဲ ကျန်ပါတော့တယ်- သားကောင်ဖြစ်ခွင့် ရမရ စမ်းသပ်ဖို့။ သူ့ရဲ့ နိုင်ငံသားကတ်ကို ထုတ်ပြပါတယ်။ သူပြောချင်တာက ထိုင်းမှာ နေထိုင်ခွင့် အထောက်အထား ဘတ်လက်မှတ် ရှိလားပေါ့။ ကျမမှာ မရှိဘူး။
ဟင့်အင်း No again..။ ကားသမား ထခုန်မတတ် ပျော်မြူးနေတယ်။ But I have passport လို့ ပြောလိုက်ပေမယ့် သားကောင်ကို ရလာပြီဆိုတဲ့ အသိနဲ့ အူမြူးနေလို့ ကျမပြောတဲ့ စကား သူမကြားတော့။
လူပွဲစားမုဆိုးဟာ သားကောင်ကို ရလို့ လာရာလမ်းကို တန်းတန်းကြီး ပြန်ခဲ့သလို အရှိန်ကိုမြှင့် မောင်းနှင်လိုက်ပါပြီ။ ကားဟာ မြို့လယ်ကနေ တဖြည်းဖြည်း မြို့စွန်ကို ပြေးကပ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ကျမ ဘန်ကောက် မရောက်ဖူးပါဘူး။ ဒါက ပထမဦးဆုံးအကြိမ်။ သတင်းထောက်ဖြစ်ဖို့ အရည်အချင်း ရှိမရှိ စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ ၂ လ ဆိုတဲ့ ကာလကို လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် အောင်ပွဲဆင်ခဲ့ပြီးလို့ သတင်းထောက်လက်မှတ် ရလာတဲ့ ကျမ။
ကိုယ်တိုင် သတင်းယူ၊ ကိုယ်တိုင် သတင်းရေး၊ သတင်းတပုဒ် ကောင်းကောင်း လွှင့်ထုတ်နိုင်ပြီလေ။ ခုလည်း ဘန်ကောက် မြန်မာသံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြပွဲအတွက် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်တွေကို မမှုတဲ့ကျမ ကင်းလျှောက်သလို ဘ၀ကိုလျှောက်၊ တောင်ကိုလည်း ဖောက်၊ မှောင်ခိုလည်း လျှောက်၊ သတင်းထောက်။
သူက ကားကို လက်တဖက်နဲ့ မောင်းရင်း ကျန်လက်တဘက်က ဖုန်းပြောနေပါတယ်။ ဘာပြောမှန်း နားမလည်ပေမယ့် ဖမာ့..ဖမာ့..ဖမာ့ တွေ ထပ်နေတယ်။ ဒီအချိန်ထိ အန္တရာယ်လို့ အတိအကျ မမြင်သေးပေမယ့် ကျမ ဦးနှောက်က အလုပ် နည်းနည်း ရှုပ်သွားတယ်။ သူပြောတာတွေကို အသံဖမ်းစက်နဲ့ ဖမ်းထားလိုက်တယ်။ ကားခေါင်းခန်းမှာ ချိတ်ထားတဲ့ သူ့ဓာတ်ပုံနဲ့ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ နံပါတ်၊ ကားအမျိုးအစားနဲ့ သူ့ရဲ့ အမူအယာတွေကို နောက်ကျောကနေ ရနိုင်သမျှ အမိအရ ကျမ ကင်မရာနဲ့ ရိုက်ကူးနေတယ်။ ကျွမ်းကျင်ရာ အလိမ္မာ၊ အလုပ်က သင်ကြားသွားတာပါ။
ကျမ ဘန်ကောက်ကို မရောက်ဖူးပေမယ့်၊ မြန်မာသံရုံးက ဒီလောက် မဝေးဘူး ဆိုပြီး သံသယ ၀င်လာတယ်။ ထိုးထိုးထောင်ထောင် တိုက်ခန့်ခန့်တွေကလည်း စန့်စန့်ကြီး၊ ကျမကို လှမ်းကြည့်နေလေရဲ့။ လမ်းတွေ ကျပ်နေတယ်။ ကားတွေ ရှုပ်နေတယ်။ မီးပွိုင့်မှန်သမျှ ကားသမားကို ဒေါသထွက်အောင် လုပ်နေတယ်။ ကျမ အမှတ်တမဲ့ နောက်ကို လှည့်ပြီး ကြည့်မိတယ်။ Oh my God! ကားနောက်မှာ ဆိုင်ကယ် တက္ကစီ ၈ စီး ထက်ကြပ်မကွာ လိုက်ပါလာတယ်။ အားလုံးက အစိမ်းရောင် လက်ပြတ် ယူနီဖောင်းတွေနဲ့။ ဒါက ထိုင်းနိုင်ငံက ဆိုင်ကယ် တက္ကစီ မောင်းသူတွေရဲ့ ယူနီဖောင်းပါပဲ။ ဒီတက္ကစီတွေ ဘာကြောင့် အစုလိုက်၊ အပြုံလိုက် ကျမကားနောက်ကို လိုက်ပါနေရတာလဲ။ တချို့က ပိန်ပိန်၊ တချို့က တုတ်တုတ်၊ တချို့ နှုတ်ခမ်းမွေးကားကား၊ တချို့ ဆံပင်ဖားလား။ ကြည့်စမ်း၊ ဘယ်လမ်းကြားတွေ မောင်းနေတာလဲ။
အဆောက်အအုံဟောင်း၊ လမ်းကြိုလမ်းကြား၊ သံရုံးက ဒီနေရာမှာ ရှိနိုင်မတဲ့လား။
ရုတ်တရက် ကားသမားက ကားကို ထိုးရပ်လိုက်ပါတယ်။ ကျမကို ပိုင်..ပိုင်..ပိုင် ဆိုပြီး အဓမ္မ မောင်းထုတ်နေပါတယ်။ “ပိုင်”ဆိုတာ မြန်မာလိုတော့ သွား.. ပေါ့။ ခုနက ပါလာတဲ့ ဆိုင်ကယ် တက္ကစီတွေလည်း အနား ရောက်လာကုန်ကြပါပြီ။ သူက ကျမကို အဲဒီဆိုင်ကယ်တွေထဲက တစီးစီးကို တက်စီးဖို့ ခိုင်းနေပါတယ်။ အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ခိုင်းနေတာပါ။ နောက်ကျော မလုံတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ပျာယာခတ်နေတာပါ။ ကားက လမ်းဟောင်းတနေရာ လူပါးတဲ့ အကွေ့တခု၊ အိုအိုမင်းမင်း အဆောက်အအုံတွေနားမှာ ထိုးရပ်ထားပါတယ်။ သေချာတာက သူတို့လိုချင်တဲ့နေရာကို မရောက်သေးတာ ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ ဒါကြောင့် လွယ်လင့်တကူ ခေါ်ထုတ်သွားလို့ အဆင်ပြေအောင် ဆိုင်ကယ်သမားတွေကို အကြောင်းကြားလိုက်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်က တစီးတည်းဆိုရင် ကျမကို အဓမ္မ စီးခိုင်းနေမှန်း ရိပ်မိမှာစိုးလို့ ကြိုက်ရာရွေးစီးပြီး လိုက်သွားဆိုတဲ့ သဘောပါ။
ကျမ ဘာတခွန်းမှ မပြော၊ ထလည်း ထမသွား၊ ကားထဲမှာနေပြီး အရင်ဆုံး လက်ကိုင်ဖုန်းကို ကိုင်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘန်ကောက် ကြမ်းပိုးကြီး ကျမသူငယ်ချင်း ကိုထိုက်ဆီကို လှမ်းဆက်လိုက်ပါတယ်။ ဟလို..ကိုထိုက်လား။
ငါ အဲမလီပါ။ ငါ ငှားလာတဲ့ တက္ကစီက သံရုံးကိုမပို့ဘဲ ငါ့ကို ဘယ်နေရာခေါ်လာမှန်း မသိဘူး။ ခုလည်း တခြား ဆိုင်ကယ်သမားတွေနဲ့ လိုက်ခိုင်းနေတယ်။ နင်မေးလိုက်ပါ ဘာပြဿနာ တတ်နေလဲ ဆိုတာ။ ကျမ ဖုန်းကို အဲဒီ ကားဆရာကို လှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ကားဆရာက ကျမဖုန်းနဲ့ စကားတွေ အော်ကျယ်အော်ကျယ်ပြောပါတယ်။ သူဘာတွေပြောနေလဲ ကျမနားထောင်နေလိုက်တယ်။ ခဏကြာတော့ ကျမဖုန်းကို ကျမဆီ ပြန်ထိုးပေးတယ်။
ကျမ နားထောင်လိုက်တယ်။ ကိုထိုက် သူဘာပြောလဲ။ အေး.. အဲမလီ လမ်းက အရမ်း ရှုပ်နေတယ်လို့ ပြောတယ်။ နင်သွားချင်တဲ့ နေရာကို အချိန်မီ ရောက်မှာ မဟုတ်ဘူး တဲ့။ နင်လည်း သိသားနဲ့ ဘန်ကောက်မှာ ဒီလောက် လူ ထူထပ်တာ၊ ဒီအချိန်ဆို ကားတွေ ကြိတ်ကြိတ်တိုး၊ ဘယ်လိုမှ အချိန်မမီဘူး၊ အဲဒါနင့်ကို စေတနာနဲ့ ပြောနေတာ။ လိုက်သာသွား၊ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။ ဆိုင်ကယ်နဲ့ဆို မြန်မြန်ရောက်မယ်။ တော်ကြာ နင်သတင်း မမီဘဲ နေဦးမယ်။
သွေးအေးနေတဲ့ လူတယောက်လို ကျမ စကားတွေ ပြောဆိုနေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမကိုယ်ကျမတော့ သိနေတယ်။ ကျမ သွေးလန့်လုမတတ် ဖြစ်နေတယ်။
ဟဲ့ ကိုထိုက်.. ငါမယုံဘူး။ သူတို့ကို ငါ လုံးဝ မယုံဘူး။ သူတို့မျက်လုံးတွေ သူတို့ ပုံစံတွေကို ငါ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင် နေရတာ၊ ငါ သူတို့ ခိုင်းတိုင်း မလုပ်နိုင်ဘူး။ သူတို့နဲ့လည်း အတူ မလိုက်နိုင်ဘူး။ ကျမ စကားမဆုံးသေးဘူး ကားသမားက စိတ်မရှည်တဲ့ပုံစံနဲ့ ကျမကို ကျသင့်သလောက် မီတာခကို ရှင်းခိုင်းပြီး ဆိုင်ကယ်တစီးကို အထာပြလိုက်တယ်။ ကျမလည်း တက္ကစီခ ဘယ်လောက်ကျသလဲ သိရအောင် မီတာဘောက်ကို ကြည့်လိုက်တယ် ဘတ် ၈၀။ ကျမ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက ၂၀ တန် ၄ ရွက်ကို ပစ်ပေးလိုက်တယ်။ ရှေ့ထိုင်ခုံကြား လွှင့်ကျသွားတဲ့ ငွေစက္ကူတွေကို သူ လှမ်းကောက်တုန်း ကားတံခါးကို ဆောင့်တွန်းပြီး အတင်း ပြေးဆင်းခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ဂျိမ်း ဆိုတဲ့ အသံကြီးထွက်အောင် တံခါးကို ပြန်ပိတ်ပစ်လိုက်တယ်။ အဲဒီအသံကြောင့် ခပ်ဝေးဝေးက လူတချို့လှမ်း ကြည့်လာတယ်။ လူတွေ လှမ်းကြည့်မှန်း သိလို့ ဒီလူတသိုက်လည်း ဟန်မပျက် ခရီးသည် စောင့်နေသလိုလို ဟန်ဆောင်လိုက်ကြတယ်။
ကျမ နောက်လှည့် မကြည့်စတမ်း ခပ်သွက်သွက် ပြေးလာခဲ့ပါတယ်။ လက်ထဲ ကိုင်ထားတဲ့ အသံဖမ်းစက်က ပွင့်သွားပြီး ကားသမားပြောတဲ့ စကားသံတွေ ကျယ်ကျယ် လောင်လောင် ထွက်နေပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်သမား တယောက် ရိပ်မိသွားတယ် ထင်တယ်။ ဘာအော်ပြော လိုက်တယ် မသိဘူး။
ဘုရား..ဘုရား..၊ ကျမ တန်းနေအောင် ပြေးတယ်။ ပြေးတယ်…။
နောက်ကနေ လိုက်ပါလာတဲ့ ဆိုင်ကယ်တစီးရဲ့အသံ အနီးကပ်ဆုံး ကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ တခြား တက္ကစီတစီး လမ်းမအတိုင်း မောင်းလာတာ တွေ့ရတယ်။ ကျမ အလျင်စလို တားလိုက်ပါတယ်။ I want to go to Myanmar Embassy.
သူတို့ကို လူကုန်ကူးသမား ဆိုတာ ကျမ တကယ် မသိခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာမှန်းသိလို့ လိုက်မပို့ချင်တာလားလို့ပဲ တွေးမိခဲ့တာပါ။ မြန်မာမှန်းသိလို့ အထင်သေး အမြင်သေး ပြောဆိုအော်အစ် နေတာလားလို့ပဲ ထင်မှတ်ခဲ့တာ။
လက်ထဲမှာ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ကိုင်ထားတဲ့ အသံဖမ်းစက်က ဖွင့်လျက်သားအတိုင်း အသံတွေက ညံနေဆဲ။ ကားမောင်းသမားက တအံ့တသြ နားထောင်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ သူက အင်္ဂလိပ်လို ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြောလာပါတယ်။
You are lucky girl တဲ့။
By ဧရာဝတီ on November 10, 2011 4:59 pm
တရားမ၀င် ကားတင်သွင်းမှုများကို အစိုးရက စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိနေချိန် အေးရှားဝေါလ် ဆိပ်ကမ်းတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသော အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်ရဲထွဋ်မှာ အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားပြီး ကျန်အရာရှိတချို့လည်း ထွက်ပြေးရန် ပြင်ဆင်နေကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ထိုကိစ္စကို မကျေနပ်သော အေးဂျင့်များက လာဘ်ယူခဲ့သော အကောက်ခွန်အရာရှိများ အကြောင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံသို့ တိုင်စာများပေးပို့ခဲ့ကြသည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်က အကောက်ခွန် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခင်မောင်လေးနှင့် ၀န်ထမ်း ၆၀၀ ကျော်ကို အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဖြင့် အရေးယူ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပြီးနောက် ယင်းနှစ်တွင်ပင် အကောက်ခွန်ဦးစီးမှူး ၁၀၀ ကျော် ခန့်ထားရန် အလုပ်ခေါ်ယူခဲ့ရာ လူ ၈၀၀၀ ကျော် အလုပ်လျှောက်ထားခဲ့ပြီး စစ်ဗိုလ်ချုပ်များနှင့် နီးစပ်သူများမှာ အထူးဦးစားပေးအဖြစ် အလုပ် ခန့်အပ် ခံခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။